Bale Iyo Benzema Oo Ka Caawiyay Real Inay Xaaqdo Las Palmas %
Gareth Bale iyo Karim Banzema oo ahaa kabtanka Real Madrid ee kulankii Las Palmas, maadaama ay maqnaanyee Cristiano Ronaldo, Marcelo iyo Ramos ayaa waxay Los Blancos ay ku hogaamiyeen guul muhiim ahayd.
Guushaan ayaa waxay ka saacideysaa Real Madrid inay cadaadiska ay kusii kordhiso kooxda kuabda cagta Atletico Madrid, taasoo hada fadhisa kaalinta labaad, halka Madrid ay ku jirto saddexaad, islamarkaana uu udhaxeeyo farqi kooban.
Kulankaan oo ay Madrid kusoo awood-roonaatay 3-0 ayaa waxaa goolashaas labo kamid ah dhaliyay Bale halka midka kalena uu shabaqa ku hubsaday Banzema, waxayna umuuqdaan kuwa Madrid hilmaamsiinaya Ronaldo.
Labo kamid ah goolashii ay dhaliyay Bale iyo Banzema ayaa waxay ahaayeen kuwa Gool-ku-laad ahaa, waxaana ay kala yimaadaan daqiiqadihii 51aad iyo 39aad ee qeybta koowaad, halka goolka kale, ee Bale uu yimid daqiiqadii 26aad ee qeybta koowaad.
Sikastaba, Los Blancos ayaa waxay hada ay ujirtaa Atletico Madrid hal dhibcood, maadaama ay kooxda ay deriska yihiin ay leedahay 64 dhibcood inkastoo ay Berri kulan ay leedahay, halka Madrid ay leedahay 63 Buundo.
Madrid ayaa maamulka garoonka gacanta ku haysay 49 boqolkiiba halka Palmas ay ku haysay 51boqolkiiba, taasoo cadeyn u ah in kulanku uu ahaa mid xiiso leh, islamarkaana ay soo bandhigeen labadda dhinac kubad aad uqurux badan.
Ma jirin ciyaaryahan labadda dhinac udheela, kaasoo la siiyay Kaarka Gaduudan, laakiin Palmas ayaa waxay qaadatay Saddex jeer karaka jaalaha ah, halka Madrid aysan qaadan wax kaar inta uu kulan ciyaareedku socday.